Qisada dagaalkii Quusiye ee Taariikhda Galay ONLF vs Ethiopia” Qaybta 4-aad. | ogaden24
Qisada dagaalkii Quusiye ee Taariikhda Galay ONLF vs Ethiopia” Qaybta 4-aad.
Waxaan maraynay ciidankii oo kala hawl qaybsaday waxaana loo kala jahaystay bari,galbeed, waqooyi iyo koonfurba Alla fiicanaa wadankaaga hooyo ka walbahaari maysid meel aad kacabsan male.
Hadaba waxaa inoo hadhsanaa qaybtii dhaawaca ahayd ee dagaalkii ugu horeeyay ku dhaawacmay sidaan sheegnay waxaan socod lahayn 3 ilaa 4 N/hure waxaana ku wadnaa tunkanaga inta kale way luudayaan runtii marka laga yimaado ku qanacsanaanta waxkasta oo halgamka kaagaga yimaada.
Laakiin waxaa in laxuso u baahan si quluubta dadka loo dareen siiyo N/hure qorigiisii iyo saanadiisii oo aaad u culus sita marka N/hure kale oo dhaawaca ah uu tunkiisa saarto tunsaarashaduna ayna ahayn mid difaac kaga saaris ah oo gaadhi iyo dhakhtar gadaal kuu joogaan ee ay tahay mid markasta ah ilaa uu ama kadhiman ama ka bogsan naftiihuraha dhaawaca ahi runtii ma sahlano aritaasu.
Waxaa intaas dheer in marar badan biyo iyo baadtoona aydaan haysan oo beerkaagu madhan yahay markaad kacdana indhu ku madoobaan carabkaaguna oon dartii laqalalo laakiin waxaa siidaran marka adigoo intaas qaba hadana tunkaaga dhaawac saaran yahay.
Balqiyaas oo ka waran marka adigii caafimaadka qabay aad dhibkaas qabto maxaad u malayn N/hurihii ay xabadu ku taalay ee waliba dhiig baxay xanuunna hadalkii daa baahida ku haysana kaala siman laakiin baahidu ay kusii dilayso dhaawaca iyo dhiig baxa xaalkiisu marar badan waa miyirbeel iyo beer ka taabasho bal inay ku jirto iyo inkale.
Kudarso oo marka laga yimaado walaaca iyo walwalka walaalkaaga dhaawaca ah miyuu dhiman ma noolaan xageed wax aad afka ka saarto uga heshaa biyo ama badhax iwm waxaa intaas kuu dheer walwalka cabsiyeed ee markasta aad ka fikiri armuu cadow idin helaa waayo aadbaad u nugushahay markaad dhaawac haysato.
Walaalayaal ma doonaayo inaan quluubtiina dhaawac iyo xanuun ku beero inkastoo uuna halganku meel qabow lahayn hadana maalinkasta sidan siidaran ma wada ah waa markaan ka hadlaayo xaga nolosha ee helida biyaha iyo baadka laakiin xaga dhaawaca iyo geeridu waa isku mid markasta ooy ku qabsato waa uun tii shalay oo kale isbadal male taasu.
Waan ku raagay sharaxaada hawl maalmeedka halgamaaga ee waxaan usoo dagaynaa meeshuu ku dambeeyay dhaawicii horta illaahay ayaa mahadleh dhaawicii uu ka badbaaday cadow laakiin wuxuuna ka badbaadin dhibaatadaas kale inkastooy aad isu dhaamaan Alxmdullillaah marka laga reebo biyo waxaa naqabsatay baahi badan.
Baahidu iyadoo dadkeena siguud uwada haysato sababna u yahay guumaysigu si gaar ahna halgamaagu ula noolyahay inkastoon ku qanacsanayn ogsoonayna noloshayadii aduunyo inay haystaan rag nalaqayr ah waajibna nugu tahay inaan ka dhacsano waana ta noosahlaysay in aanu ku samiro wax kasta oo halganka nagasoo gaadha.
Hadaba waxaan xasuustaa amin barqo subax ah anagoo wiilashii wadana ayaan kusoo baxnay reer cidii wali ayna dareerin waxaa kusoo baydhay aniga iyo wiilal kale bariido kadib waxaan waydiinay inay caano geela nooga lisaan waxay awoodaan sababta aan u dooranay inaan caano kali ah waydiino waxaay ahayd inaan wiilasha u badhaxno si ay wadnaha ugu saydhaan waayo qaarbaa sidaan sheegnay aad u dhiigbaxay.
Anigaa lahadlay ninkii reerka ka odayga ahaa wuxuuna iigu jawaabay maya ma awoodo inaan caano idin siiyo saaka waxaan ku idhi maxaa dhacay adeer wuxuu yidhi waan cabsan oo waxaan ka baqi in laydhaho ONLF ayuu wax siiyay dabcan saaka layaab male odaygu waayo waxaa dhagihiisa kasii shanqadhaayay xabadii shalay lays ku garaacayay oo waxaaba jira dad dhulkoo nabada xataa biyaha kuu diidi marmar.
Anaga oon wali ka qancin ayaa waxaa billaamay rasaas aad u xoog badan oo ah ciidankeenii aan ka soo sheekaynay ee goobtii ku hadhay iyo cadowgii oo ishelay intiinii la socotay qisooyinkii hore markaas odaygii hadalba uu daayay xaalkiina wuxuu noqday kud ka guur oo qanjo u guur waan ka tagnay.
Laakiin nasiib daro dhaawaca qaarkii wadno baab ayuu la ildaran yahay markaan u nimid ciidankii iyo wiilashii dhaawaca ahaa waxaan is waydiinay reerkan yaa yaqaana oon ula jeedno yaa ka dhashay N/hurayaasha oo inala socda N/huraa yidhi war anigaa aqaana oo macnaheedu yahay ka dhashay markaasbaan ku nidhi warbal wiilal ka xayso oo ku noqo sidii buuyeelay halgamaagii.
Waxaan maqli jiray carabi illaahay kama cabsato intay ceeb ka cabsato odaygii wiilkii markuu gartay inuu ina hebal yahay ayuu wuxuu u soo dhiibay gaawe wayn oo budh ah
Waxaa laga yaabaa inuu kali ah ka taxadaraayo ina hebel oo baahan ayuu wax u diiday deetana ku dhacdo gabadhaa guur waa
Laakiin anagu subaxaas waan u ducaynay dariiq kasta oo uu wax nagu siiyana waxaa nooga waynayd dhibka nahaystay lagana yaabi lahaa in ay nafba baxdo hadii illaahay mujaahidkaas noobixinin sidii ayaan wiilashii afka uga saaray caanihii runtii wax kasta markaad u baahantahay ayuu dahab yahay.
Waan sii soconay habeenkii dambe illaa maalinkii dambe ayaan waxaan wakhti duhur ah dagnay meel meelihii aan u soconay ah meelkasta oo risiq laga doonan lahaa waxaa fadhiya cadowgii wiilashii geedo hoos ah ayaan maryo ugu dalaalimaynay difaacana waan kala galay waardiye adagna waan yeelanay illaahay ayaa wax ilaashee.
Markaas naftanada maba xasuusnin ee waxaa na walaacinaaya meeshii aan wiilasha wax ay afka saaraan ama cunaan uga heli lahayn Alxdullillaah laakiin waxaa dhulka ka buuxa biyo aan xili lahayn gu iyo jiilaal toona waana sababta aan halkan usoo dooranay markaan saacado fadhinay ayaan maqalay waardigii oo lah istaag meeshana wax dad ah iyo reero midna majiraan waa cidlo.
Waardigii waxaa u tagay wiilal kale oo caawiya waxaana meesha taagan ruux haween ah maxaad ahayd idinka umbaan idinku socday meel ayaa la fadhiisayay ka bacdi waa la aqoonsaday waxay noqotay gabadh xaas naftii hure ah waxayna lug kagasoobaxday magaalo maalin socod ka dheer labo maalin socodna ka yar waxayna sidaa wax kasta oo uu ruux bila aadan ah qaadi karo oo cunto noocyeheeda kala duwan ah.
Waxayna tidhi wiilasha raashinkan u geeya ooy ula jeedo siguud halgamayaasha waayo iyadu markaas ma oga wax dhaawac ah runtii waxay ahayd arin aad nooga yaabisay markaad eegto sida cadowgu ahaa iyo calool adayga gabadha iyo dhanka kale sida halgamayaasha dhaawaca ahi iyo guud ahaanba loogu baahnaa maalinkaas waxay u keentay.
Isku soo wada duub dhaawicii sidaas ayuu ku badbaaday Alxdullillaah wuuna wada bogsaday dhamaantii.